HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Talaado Ah 17 May
May 17, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Chelsea ayaa laga yaabaa inay Barcelona kula biirto tartanka loogu jiro weeraryahanka Bayern Munich ee Poland Robert Lewandowski, oo 33 jir ah (Guardian).
Newcastle United ayaa isha ku haysa in ay lasoo wareegto tababaraha kooxda Roma ee Jose Mourinho xagaagan St James Park inkasta oo uu dhawaan guulo gaadhay tababaraha haatan ee Magpies Eddie Howe (Express).
Tababaraha soo socda ee Manchester United Erik ten Hag ayaa sheegay in uu haysto “doorasho uu uga shaqeeyo koox kale, oo leh aasaas wanaagsan” laakiin uu doortay inuu qabto shaqada Old Trafford. ( Manchester Evening News)
Real Madrid ayaa heshiis shan sano ah la gaartay weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, 23-sano jirkaan ayaana beeca xorta ah ugu biiri doona kooxda reer Spain marka uu qandaraaskiisa Paris St-Germain dhamaado xagaagan. (Marca)
Laakiin Mbappe wax waraaqo ah uma saxeexin Real Madrid , PSG ayaana wali isku dayaysa in uu sii joogo. (The athletic)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan, oo 31 jir ah, ayaa loo ogolaan doonaa inuu ka tago kooxda xagaagan. (DailyMail)
Barcelona ayaa diyaar u ah inay riixdo heshiiska weeraryahanka reer Brazil ee Leeds Raphinha laakiin West Ham ayaa ka mid ah kuwa weli doonaya 25 jirkaan. (90min)
Wakiilka Gareth Bale ayaa xaqiijiyay in 32 jirka reer Wales uu ka tagi doono Real Madrid xagaagan – laakiin ma uusan sheegin inuu ciyaaraha ka fariisan doono iyo in kale. (Mirror)
Bayern Munich ayaa xiiseyneysa inay lasoo wareegto weeraryahanka Barcelona Ousmane Dembele, oo 25 jir ah, iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka France uu qandaraaskiisa kooxda Spain dhacayaa bisha soo socota. (Sky Sports)
Lyon ayaan la filaynin inay heshiis joogto ah kula soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee Tottenham iyo France Tanguy Ndombele, iyadoo 25 jirkaan ay u badan tahay inuu ku laabto waqooyiga London ka dib markii uu amaah kula joogay kooxda Faransiiska. (Insider)
Newcastle iyo Aston Villa ayaa hogaaminaya tartanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds iyo England Kalvin Phillips, oo 26 jir ah, xagaagan. (Insider)
Daafaca reer England ee Lucy Bronze ayaa heshiiskiisa Manchester City waxa uu dhacayaa xagaaga, 30 jirkaan ayaa isha ku haya inuu u dhaqaaqo NWSL ee Mareykanka. (Telegraph)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City iyo England Georgia Stanway, oo 23 jir ah, ayaa heshiis labo sano ah la gaaray Bayern Munich. (Sky Sports)
Kooxda Arsenal ayaa heshiis la gaartay xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Sao Paulo iyo xulka Brazil ee Marquinhos oo 19 jir ah iyaga oo ku kacaya 3.5 milyan oo euros kaas oo socon doona ilaa 2027. (Fabrizio Romano).
Laakiin daafaca Arsenal ee Greece Konstantinos Mavropanos, oo 24 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu heshiiska amaahda ah ee Stuttgart ka dhigo mid joogto ah. (Fabrizio Romano)
Daaficii hore ee England iyo Arsenal Sol Campbell, oo 47 jir ah, ayaa lagu wadaa in laga wareysto shaqada maamulaha Queens Park Rangers ee uu banneeyay Mark Warburton. (Talksport)